काठमाडाैंमा मोटरसाइकल चलाउदै हुनुहुन्छ ? आजदेखि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम — Imandarmedia.com
काठमाडाैंमा मोटरसाइकल चलाउदै हुनुहुन्छ ? आजदेखि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै मोटरसाइकल चलाउन दिने भएको छ । तर मोटरसाइकलमा एक जना भन्दा चढ्न नपाइने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मोटरसाइकलमा चालकले मात्र यात्रा गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै सबै प्रकारका पैदल आवागमन, साइकल र मोटरसाइकल चल्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । त्यस्तै सबै प्रकारका ढुवानी पनि खुला गरिएको छ ।यो व्यवस्था बिहीबारदेखि नै लागू हुनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात तत्काल नचलाउने पनि निर्णय गरेको छ । निजी सवारी साधान सञ्चालनमा भने सहज हुने भएका छ । उपत्यकाभित्र जोर विजोर लागू गरेर निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिइनेछ । काठमाडाैं उपत्यका बाहिरको हकमा जिल्लाभित्र निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारी तथा निजी कार्यालय र बै‌ंक, वित्तीय संस्थाका कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन र कर्मचारीबीच दूरी कायम गर्न कार्यालय दुई सिफ्ट चलाउने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । असार १ गतेदेखि सबै सरकारी, निजी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय विहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म र १ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले धेरै काम हुने र कार्यालयमा पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारले चैत ११ गते लकडाउन सुरु गरेदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सरकारी कार्यालय बन्द थिए ।
नेपालमा बिहीबार थप २५० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार ६१४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म ४ हजार ६१४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।
प्रवक्ता डा देवकोटाका अनुसार प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका ३ जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै नारायणी अस्पताल विरगञ्जको प्रयोगशालामा रौतहटका ३ जना पुरुष, किटजन्य रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला हेटौंडामा बाराका ७ जना र धादिङका ७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीका २ जना पुरुष, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा सप्तरीका ९ जना पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीका २ जना पुरुष, रौतहटका १५ जना पुरुष र महोत्तरीका ४ जना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका ३ जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा दाङका ८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएका छन् । उनीहरु मध्ये २ जना महिला र ५ जना पुरुष रहेका छन् ।
यसैगरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालमा रोल्पाका १४ जना, बाँकेका १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै सुर्खेत अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका ४८ जना र सुर्खेतका ७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रुपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका एकजना पुरुष,प्युठानका ४ जना र रुपन्देहीका २९ जना रहेका छन् । यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालमा कैलालीका ७ जना, बाजुराका १८ जना र बझाङका २ जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नवलपरासी पश्चिमका ६ जना पुरुष, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका १ जना पुरुष, रौतहटका ३९ जना पुरुषहरु रहेका छन् ।
प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार प्रदेश १ का १३ जिल्लामा ५ सय ७ जना, प्रदेश २ का ८ जिल्लामा १ हजार ६ सय ७१, बागमती प्रदेशका १२ जिल्लामा १ सय ४७ जना, गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लामा १ सय ४७ जना, प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा १ हजार ३ सय ९९, कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा ७ सय ५९ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।